Songs Archive - Jerung Films
किराँत राई साँस्कृतिक कलाकार द्वारा आफ्नो १४ औ स्थापना दिवसको अवसरमा कलाकारिता क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएका ब्यक्तित्वहरुलाई नगद राशि सहित सम्मान गर्ने तायारी
राज कुमार राई,८,असाढ–काठमाण्डौं । किराँत राई साँस्कृतिक कलाकार संघले आफ्नो १४ औ स्थापना दिवस भब्यरुपमा मनाउने तयारी गरेको छ । यो संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सफल रुपमा फन्को मार्दै १४ औ बर्ष पूरा गरेको अवसरमा यही असाढ १४ गते बार्षिक उत्सव मनाउन लागेको हो । मानव सभ्यताको प्रतीक हो,कला र संस्कृति हाम्रो चिनारी, भन्ने मुल नाराका साथ ललितपुरको जि.वि.स. हलमा एक कार्यक्रमका बीच आफ्नो बर्षिक उत्सव मनाउन लागेको शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरि सस्थाले जानकारी गराएको छ । किरात...
गायक एल्बी पुन मगरको भाले नभन हाँस्य कमेडी रोचक गीतको बिमोचन
जेरुङ फिल्मस संवाददाता,१,पोष काठमाण्डौं । गायिका अमृता लुंगेली मगर र कुशल गायक एल्बी पुन मगरको भाले नभन बोलको गीत शनिबार बिमोचन भएको छ । दाजुभाई क्याटरिङ पाटी प्यालेसमा चर्चित दोहोरी गायक किरण बाबु पुनको प्रमुख आतिथ्यमा भिडियो सहित यो गीतको बिमोचन गरिएको हो । हाँस्यकलाकार सुमन मगरको सभापतित्व तथा कार्यक्रममा निर्देशक तथा सर्जक तिलक रोक्का मगर, निर्दशक पेम्बा लामा, ,गायक नन्द घर्ती मगर, हाँस्य कलाकार खवबु चन्चल मगर आदी अतिथिको रुपमा रहेर कार्यक्रमको शोभा बढाएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै...
जेरुङ फिल्मस संवाददाता,२६,पौष–काठमाण्डौं । गीत संगीत तथा मोडलीङ क्षेत्रमा अब्बल रुची राख्ने सन्तोष पोख्रेलले आफ्नो रुची मात्र नभएर सिङगो सपना नै यस क्षेत्रमा रहेको बताउनु भयो । सानै उमेरदेखि सुनौलो सपना बोकेर कलाकारित क्षेत्रमा प्रबेश गरेका सन्तोष पोख्रेल यतिखेर निदेर्शनमा समेत व्यस्त हुने भएको छ । बर्दिया जिल्लामा जन्मेका पोख्रेल सानैदेखि गीत संगीत भने पछि हुरुक्कै हुन्थे । वाल्यकालमा शान्त स्वभाव तथा औधी प्रकृति प्र्रेमी भएको उहाले बताउनु भयो । विद्यलय तथा वरिपरि नजिक कुनै साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने वित्तिकै...
खोटाङ साईनो कला केन्द्रकोे मार्मिक व्यानर गीत सार्बजनिक, बजारमा व्यापक चर्चा
﻿ जेरुङ फिल्मस संवाददाता ,१३, पौष–काठमाण्डौं । पूर्वीय नेपाल खोटाङ जील्लामा अवस्थित साईनो कलाकेन्द्रले आफ्नो व्यानर गीत सार्बजनिक गरेको छ । मेरो र उनको,उनको र हाम्रो सबैको चौतारी, एउटै हो लक्ष साईनो जोड्ने बनाउने फूलबारी आपसी माया पे्रम अनि राष्ट्र भावनाले ओतप्रोत गीतको कभर भिडियो बिहिबार सार्बजनिक गरिएको छ । भक्त विश्वकर्माको संगीत तथा साईनो कलाकेन्द्रका अध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठको शब्द रहेको मार्मिक गीतलाई कुमार सिन्जाली मगरले ऐरेञ्ज गरेका हुन् । साहित्य स्रष्टा एवम् गीतकार प्रमोद श्रेष्ठको नेतृत्वमा खोटाङ जील्लाबाट...
वाल गायक मनिष लिम्बुलाई आर्थिक सहयोग रकम वितरण,घर निर्माण कार्यमा लगानी गर्ने मनिषको उदघोष(भिडियो) सहित
राजकुमार कुलुङ राई,६,पुष–काठमाण्डौं । वाल गायक मनिष लिम्बुको नाममा कोरियाबाट आर्थिक सहयोग रकम पठाईएको छ । सो रकम गायीका बिनिता राई र आमुल परिवर्तन पार्टीका अध्यक्ष भरत गिरीले वितरण गरेका थिए । बिहिबार अनुभव थकाली भान्सा घर कुसुन्तीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो रकम वितरण गरिएको हो । लोक प्रीय वाल गायक मनिषको नाम्मा हाल कोरिया स्थित रहेका रजिन बाबु ( श्याम ) राईले पहल गरि जम्मा ४९,५०० रकम उठाएका थिए । बिदेशमा रहेका सहयोगी मनहरु जम्मा २५ जनाबाट सो...
ओखलढुङ्गा भिजन आईडल प्रवृती राईको हजारौलाई रुवाउने मार्मिक गीत सार्बजनिक
﻿ जेरुङ फिल्मस संवाददाता,६,पौष –काठमाण्डौ । २०७५ को ओखलढुङ्गा भिजन आईडल बिजेता प्रवृती राईको हजारौलाई रुवाउने मार्मिक पहिलो गीत सार्बजनिक भएको छ । पूर्वीय नेपालको खोटाङ जिल्लामा जन्मेकी राईले तिमीले छाडी जादा मेरो के हालत हुन्छ ? बोलको गीत बजारमा ल्याएको हो । सानै उमेरदेखि नै गीत संगीतमा रमाउने सुनौलो सपना बोकेकी राईले साईनो कला केन्द्रबाट आफ्नो सांगीतिक यत्रा गर्ने सुनौलो मौका पाएको बताइन् । प्रमोद श्रेष्ठको शब्द रहेको“तिमीले मलाई छाडी जादाँ मेरो के हालत...
छैठौ लोक दोहोरी अवार्ड २०७५ बिबादमा, अवार्ड पाएको व्यक्ति किन अवार्ड लिन गएनन त ?
जेरुङ फिल्मस संवाददाता,३,पुष–काठमाण्डौ । हरेक वर्ष दोहोरी अवार्ड प्रतियोगिता गर्दै आएको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिले यो बर्ष पनि छैटौ लोक दोहोरी अवार्ड प्रतियोगिता गरेको छ । यस बर्षको राष्ट्रिय लोक दोहोरी अवार्ड भने गत बर्षको दाजोमा केही फितलो भएको महशुष गरिएको छ । निर्धारित समय भन्दा करिब तीन घण्टा ढिलो गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । शिब हमालले आफ्नो कार्यकालमा अवार्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुनै सफल नपाएको र कसैलाई पनि चित्त बुझाउन नसकिएको...
बाल गायक मनिष लिम्बु र बिनिता राई असन बजारमा बेपत्ता, खोजतलास पछि यो अवस्थामा भेटिए( भिडियो सहित )
राजकुमार राई, २३ मंसिर–काठमाण्डौं । असनको बजारमा निकै मानिसहरुको ठुलो भीडभाड थियो । सानो डल्ले भाई हराएको खबर आयो । प्रहरीको कर्लेक्समा हराएको त्यो डल्ले भाई वाल गायक मनिष लिम्बु हो भन्ने खबर आयो । मानिसहरु तितरबितर गर्दै थिए । अलि परबाट एउटा गहुगोरी युवती आईन् र असनैको बजारमा सिठ्ठी मार्यो कल्ले, मान्छे हेर्दा डल्ले डल्ले…भन्ने बित्तिकै एउटा सानो बालक असैको बजारैमा सिठ्ठी मार्र्यो, मैले भन्दै अगाडी टुप्लुक्क आईपुग्यो । त्यो जोडी हुन् वाल गायक मनिष लिम्बु र चर्चित गायीका...
फिल्म ‘गरुड गीतको कभर भिडियो निर्माण गर्नेले ५० हजार नगद पुरस्कार पाउने
जेरुङ फिल्मस संवाददाता,२१,मसिंर– काठमाडौं । फिल्म ‘गरुड पुराण’ ले आफ्नो गीत ‘म त पिरिममा’ गाउने दर्शकका लागि उपहार योजनासमेत ल्याएको छ । सो योजना बमोजिम गीतको कभर भिडियो निर्माण गर्नेले ५० हजार नगद जित्न सक्ने योजना निर्माण युनिटले अहिले सार्वजनिक गरेको छ । केही पहिले सार्वजनिक यो गीतको बढ्दो लोकप्रियतालाई ख्याल गर्दै यो उपहार योजना ल्याइएको आयोजकले जनाएको छ । गीतमा कभर भिडियो निर्माण गर्ने मध्यबाट उत्कृष्ट एकले नगद रु ५० हजारका साथै एउटा म्युजिक भिडियो र फोटोसेसनको...